Maxaa Lagu Qexaa Cilmi-Baaris?
Cilmi baaris waa eray farsameed loo isticmaalo tacliinta sare gaar ahaan jaamacadaha. Sida ka muuqato eragya, waa labo eray oo isu tagay CILMI iyo BAARIS. Sida dhabta ah ma jirto hal qeexid oo la isku wada raacsanyahay oo ay leedahay cilmi-baarsitu, waxaase jiro qeexisyo kala duwan oo ay u sameyeen dadka ku xeel dheer cilmi baarista. Cashark waxaynu ku soo bandhigi donaa qeexista kala duwan ee laga bixiyay Cilmi-baarista.
Cilmi-baaristu waa hab celimiyeeysan oo lagu baaro xogta uu leeyahay mawaduuc cayiman. Waxaa kaloo lagu qeexaa cilmibaaristu in ay tahay nidaam lagu raadinayo xaqiiq cusub oo lagu soo kordhiyo qayb ka mid ah cilmiga jiro. Qubarada qaar ayaa cilmi baarista ku shegay in tahay nidaam lagu ogaanayo wax aan aqoon loo lahayn, sidoo kale waxay ku shegaan in cilmi- baaristu in tahay safar lagu daahfuraayo aqoonta dahsoon. Si lamid ah waxaa cilmibaris lagu shegaa in ay tahay tilaabo kasto oo lagu doonaayo in lagu ogaado wax aan la ogayn natiijadooda iyada oo loo baaraayo hab leh habraac iyo nidaad loogu talagalay.
Marka loo eego Clifford Woody, cilmi-barista waxaa uu ku sheegay in ay tahay dhib jiro oo la ogaado, la saadaliyo xalka, la sameeyo xog aruurin ku saabsan dhibaatada, kadib xogta la falanqeeyo ugu dabayntiina la isbar bardhigo wixi la saadaliyay iyo natiijada dhabta ah ee soo baxday xog ururinta. Dhinaca kale D. Slesinger and M. Stephenson waxay cilmi baaris ku shegeen in ay tahay nidaam lagu balarinayo, lagu saxayo, ama lagu xaqiijinaayo cilmiga jiro. Cilmi-baaristu, waa tabaruca asalka ah ee aqoonta jirta iyo in la horumariyo cilmiga. Cilmi barista waa in la raadiyo runta iyada oo loo baarayo hab nidaam cilmiyeed ah sida tijaboyin, waraysiyo, isbar bardhig iwm. Cilmi barista waa hab xal loogu helaayo dhib jiro oo taagan . Ugu danabayntii cilmi-baris waa hab nidaamsan oo wax loo baaro iyada oo la raadinaayo aqoon cusub oo lagu kalsoonaan karo.
Hadafka laga leeyahay Cilmi-baarista
Hadafka laga leeyahay cilmi-baarista waa ay kala duwanaan kartaa, waxaase ugu muhiimsan in jawaab loogu helo su’ aalihi aan la aqoon jawaabtooda iyo in la soo helo runta aan weli la ogaan iyadoo lagu radinaayo hab cilmiyeeysan. Sida aan horay u sheegnay, hadafka cilmi baarista waa uu kala duwanaan karaa, waxaase ugu waawayn hadafka qodobada soo socdo midkood.
1- In baaritaan lagu sameeyo qaar ka mid ah xaaladda hadda jira ama dhibaato taagan,si xal loogu heli lahaa dhibaatada.2- in la sahamiyo lana falanqeeyo arrin guud .3- in la dhiso ama abuuro hab cusub ama nidaam .4- in la sharaxo arin ugub ah .5- in la dhaliyo aqoon cusub .
In la tijaabiyo oo saadaal laga bixiyay xiriirka ka dhaxeeyo doorsoomayaasha ( Hypothesis testing study)
Laba ama in ka badan oo ka mid ah kuwa kor ku xusan
Waxaa Soo diyaariyay. La soco qaybaha kale isbuucyada soo socdo
Dr. Shafici Sharif Mohamed.